Akakurumbira matunhu eThailand paDepepi Yakadzika COVID-19 yambiro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Akakurumbira matunhu eThailand paDepepi Yakadzika COVID-19 yambiro
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Thailand matunhu pane Yakadzika Tsvuku COVID-19 yambiro
Bangkok, Chonburi, Chiang Mai, Nonthaburi, Pathum Thani, uye Samut Prakarn vanoiswa seyakanyanya uye yakaoma nzvimbo yekudzora (yakadzika tsvuku) muThailand umo mimwe mirawo yakaiswa.
Mutauriri weCentre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) akataura kuti vakabvuma kusimbisa matanho ekudzivirira uye ekudzivirira eCOVID-19.
Nzvimbo dziripo parizvino dzakakamurwa seyakanyanya uye yakasimba kutonga, yakanyanya kutonga, kana nzvimbo yekutonga.
Yambiro yepamusoro inokonzeresa kurambidzwa uye kuvhara.
Dr. Taweesin Visanuyothin, Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) Mutauriri, akaburitsa pachena kuti vakabvuma kusimbisa COVID-19 matanho ekudzivirira uye ekudzivirira. Kugadziriswa patsva kwe Tairendi nzvimbo dzekudzora dzakagamuchirwa seinotevera:
1) nzvimbo yepamusoro uye yakasimba yekutonga: matunhu matanhatu,
2) nzvimbo yepamusoro yekutonga: matunhu makumi mashanu, uye
3) nzvimbo yekutonga: matunhu makumi maviri nematanhatu. Kuzviparadzanisa kwemarudzi ese kwakawedzeredzwawo kusvika mazuva gumi nemana, nepo zvikamu zveveruzhinji nezvezvakazvimirira zvichifanira kufunga nezvekushanda zvakaoma kubva kumba kwemazuva gumi nemana.
Zvimwe zvinorambidzwa nekuda kwenzvimbo yepamusoro yekuzivisa zvinosanganisira: